एजेन्सी । गर्मीको मौसममा एकसाथ सजिलो कपडा लगाउनु र स्टाइलिस देखिनु अप्ठ्यारो काम हो । तर तपाईंले चाहनुभयो भने एकै किसिमको फ्याब्रिकबाट धेरै किसिमको स्टाइल पाउन सक्नुहुन्छ । कटन र रेवनको कपडालाई कमै महिलाहरुले मन पराउँछन् किनभने यसमा धेरै स्टाइलका कपडाहरु पाउन सकिँदैन । तर यो फ्याब्रिक धेरै नरम, र प्रकृतिमैत्री हुन्छ । यदि तपाईं पनि यो फ्याब्रिकलाई बोरिङ सोच्नुहुन्छ भने आजैबाट आफ्नो भ्रम हटाउनुहोस् । किनभने जब तपाईं कटन र रेवनको कपडा लगाउनुहुन्छ तब तपाईं भीडमा भिन्न देखिनुहुन्छ । साथै यसमा विभिन्न स्टाइलिस लुक्स पनि पाउन सकिन्छ ।
१. स्केटर ड्रेस
गर्मीको मौसममा स्टाइलिस र सजिलो देखिने कपडामध्ये एउटा स्केर्टर ड्रेस पनि हो । गर्मीमा तपाईंले यो कपडा ट्राइ गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो ड्रेस कटन र रेवनका कपडाहरुमा धेरै आउने गर्छन् । यस्तो कपडा जुनसुकै ठाउँमा लगाएर सजिलै हिँडडूल गर्न सकिन्छ ।
२. स्ट्रेट कुर्ता
अत्यधिक गर्मीको समयमा कटनको कुर्ता लगाउनु सबैभन्दा राम्रो आइडिया हो । कटनको कपडाले गर्मीको दिनमा पनि ताजा महसुस गराउँछ ।
३. ए लाइन कुर्ता
गर्मीको समयमा फरक देखिन चाहनुहुन्छ भने ए लाइन कुर्ता ट्राइ गर्नुहोस् । यस्तो कुर्ता केही खुल्ला हुने हुँदा यसबाट हावा आवत जावत गर्नसक्छ । साथै यो कपडा शरीरमा टाँसिदैन ।
४. फ्लेयर्ड स्कर्ट
गर्मीमा आफ्नो खुट्टाहरुलाई लामो पेन्टबाट छुटकारा दिनुहोस् । स्टाइलिस देखिन स्कर्टको मद्दत लिनुहोस् । डेटमा जान होस् वा अन्य कतै कटनबाट बनेको लेयर्ड स्कर्ट स्टाइलको साथसाथै सजिलो पनि हुन्छ ।